How about MZ Re-connect? — MYSTERY ZILLION
How about MZ Re-connect?
November 2015 in Idea
How about we makeamember gathering event titled "MZ re-connect"?
First of all @saturngod shall come back to Yangon for it.
အကျွေးအမွေးပါ မှာလား ငင့်? 8-}
November 2015 edited November 2015 Administrators
How about chinese new year in February ?
CNY sounds good. I am not sure how many ppl will turn up. But we need to make event and start advertising on basically FB.
MZ က ပွဲတွေ တစ်ခါမှမလာဖူးဘူး။ တရုတ်နှစ်သက်ကူးဆိုရင်တော့ တော်တော် အဆင်​ြေပမယ်။ ရုံးလည်း ခွင့်ယူစရာမလို​တော့ဘူးပေါ့။ လုပ်ဖြစ်ရင်တော့ လာဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်။
January 2016 edited January 2016 Registered Users
​​န​ောက်လထဲ ​တွေ့ မယ့်ကိစ္စ လုပ်ဖြစ်ကြလားမသိဘူး?
လေယာဉ်လက်မှတ် စျေးတွေက အတော့်ကို များနေတော့ ပြန်လာဖို့ ကျွန်တော် အဆင်မပြေလောက်ဘူး။ ကျွန်တော် ကိုသာသာ နဲ့ သေချာ တိုင်ပင်ပြီးတော့ ပြောပေးပါမယ်။ လေယာဉ်လက်မှတ်စျေးလည်း တချက်လောက် ကျွန်တော် ပြန်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်။